By ibrahim Aden shire September 27, 2017
Eebe in badan ayuu qisooyin Qur'aanka kariim ah ku keenay. culimada tafsiirku waxay sheegeen in waqtiyadda kala duwanaa ee suuradaha iyo ayadaha qisooyinka Suubanaha SCW lagu soo dajiyay ay ahaayeen marar uu culeys badan dareemay sidaa darteedna looga warramay in hortiis waxaanu jireen nabiyo badanna ay qabsadeen in badan inta isaga haysato si niyadda loogu dhiso laabtiisana loo waasiciyo. Hadaba anigoo halkaas ka duulayo ayaan halkaan idinkula wadaagi qiso ka dhacday dalka Siiraalyioon oo ah dalka Afrikaan ah.
Sidaa darteed caruurta ay askareeyeen ayaa subixii u kallaho tuulooyinka ay dagan yihiin dadka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ah waxayna gacmaha ka soo guraan cid walba oo ay ka xoog badan yihiin, mid walbana casarki ayuu yimaadaa isagoo sido jawaan uu qaadi la'yhay oo gacmo caruureed ah.
Arintaan waxay argagax galisay aduunka oo dhan, waxaa muraala dillaacay qof walba oo daawaday caruurta yar-yar oo gacmaha gumudan ee dariiqyada wareegayo, gurmad balaaran ayaana loo fidiyay. kumanaan kun oo hayadood ayaa isugu yimid. xeryo dhowr ayaa loo furay si loogu xannaaneeyo dadka ku curyaamay. Waxaa loo keenay maraakiib gacmo iyo lugo macmil ah (artificial) ilaa meel la dhigo la waayay. Xeryihii loo dhisay caruurta ayaa isu badalay xarunta 'igu sawir' ee dhammaan dadka caanka ah ee aduunku isugu yimaadaan ilaa ay u muuqatay in qofki magac leh ee tagi waayo loo arko mid aan damiir aadane lahayn.
Gabadha la yiraahdo Linda Polman ayaa buugeeda (War Games) ay ka qortay sida cawimaadaha la siiyo wadamada dagaaladu ka jiraan ay usii huriyaan dagaalka waxay ku warisay qisidaan. waxay tiri anigoo maalin socdo ayaan arkay xayaysiis ku qoran mid ka mid ah joornaalada wadanka Siiraaliyoon. Xayaysiisku wuxuu leeyahay 25 canug ayay hay'ad heblo fiisse ooga heshay dalka Jarmalka marka waxaa la rabaa cid tikidhada ka bixiso.